REFU AZVAKAITIKA Electronic
DC kutapata cores
DC kutapata hwoupenyu that cores
DC kutapata chete cores
EMC Common Mode kuvhunga cores
High ano zvakafanana muoti chipingaidzo firita moyo
Nanocrystalline that cores nokuti Current transformer
Nanocrystalline that cores nokuti Leakage Circuit Namafungu
Nanocrystalline that cores nokuti Power transformer
Basic parameter pamusoro ribbon1K101
Basic parameter pamusoro ribbon1K107
Ko zvinhu zvenyu zvakatipoteredza?
Hongu, cores edu zvigadzirwa vari zvakatipoteredza uye SGS advertising, The zvinhu yepakutanga isu achishandisa kufanana epoxy unhani zvinhu uye nyaya ine Rohs uye Ul advertising zvakare.
About chaiyo kukura cores, kana unogona kupa.
Hongu, kana saizi yako inokosha, tinogona kuita kuti iwe too.we unogona kufunga rakavhurika nyaya mold.we vane mhosva gadzira, vanogona kuzarura chakuvhuvhu mukati 2 week.So haisi dambudziko.
About itsva chirongwa uye chokupika chaizvo, unogona kupa?
About basa idzva, ticharamba achitsigira customer.we anogona kuita yokuedzwa uye zvibereko ivhu kuti approval.we yako vanofara kugamuchira chirongwa chitsva uye request.It itsva kubatsira kwatiri zvakare.
Kana chigadzirwa unhu yacho haisi chikumbiro chedu, sei kuita?
Chokutanga, tichadzivisa thing.we uyu achaita ivhu pamberi batch mangé production.After yedu mutengi approval.we achatanga production.So unhu uchasangana customer.As pamusana yedu chigadzirwa mabasa mismatch, isu achatakura zvose mutengi wacho varasikirwa.
Sei pamusoro pasuru?
About pasuru, tichaita nechokwadi zvinokuchengetedzai nendege kana gungwa shipping.Our dzaishandiswa rokutengesa ane anopfuura 5 makore ruzivo muna export.So iwe musafunganya pamusoro package.On dzose, tichashandisa nhovo kuti adzivirire zvinhu.
Dry Type transformer , Iron- Based Amorphous Ribbon , Fe Based Amorphous Ribbon , Emc Core, Nanocrystalline Core , Nanocrystalline that cores For Current transformer ,